काठमाडौँ, २८ जेठ । नेपाल र मरिसस सरकारबीच श्रमिक आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आज दुई मुलुकका अधिकारीबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस..
काठमाडौँ, २८ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले हालै अघि बढा..
गोपालचन्द्र सुवेदी काठमाडौंँ, २८ जेठ । नेपाल चीन हुँदै तेस्रो देशसम्मको ब्यापारक..
काठमाडौं,२७ जेठ । रोजगारीका लागि कोरिया जाने सपना बोकेका बेरोजगार नेपाली युवाले ..
काठमाडौँ, २६ जेठ । इमान्दार प्रयास भयो भने जस्तोसुकै अप्ठ्यारो काम पनि सम्पन्न..
आफूखुशी मूल्य वृद्धि, लुटिँदै उपभोक्ता
काठमाडौं, २५ जेठ । बजेट पूर्व कायम भएको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य व्यापारीको मिलेमतोमा हालसम्म फिर्ता गरिएको छैन । व्यापारीहरूले विभिन्न बहानामा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य आफुखूसी तोकेका थिए । दैनिक उपभोग्य बस्तुको उपभोक्ता मूल्यमा सय रुपैयाँसम्म वृद्धि गरिएको थियो । बजेट वक्तव्य आउनुभन्दा तीन दिनअघि दैनिक उपभोग्य ..
सुस्त गतिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : १ खर्ब ८४ अर्ब थपियो व्ययभार
काठमाडौं,२५ जेठ । देशको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठूला आयोजनामा वर्षौँसम्म प्रगति नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ नाम दिएर प्राथमिकतामा राखे । ०६८/६९ मा भट्टराई सरकारले त्यस्ता १७ आयोजनालाई विशेष महत्व दिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटे । ०७०/७१ मा थप चार र चालू आर..
सुर्खेत, २४ जेठ । वीरेन्द्रनगर–१ का ५० घरधुरी दलित समुदायले व्यावसायिक भैँसीपालनको शुरुआत गरेका छन् । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अनुदान सहयोगमा दलित समुदाय भैँसीपालनमा जुटेका हुन् । दलित समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले त्यहाँका प्रत्य..
काठमाडौँ, २४ जेठ । सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय जोखिम न्यून गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रत्नपार्कदेखि महाराजगञ्जसम्म विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्यसँगै सञ्चार प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने तार पनि भूमिगत गर्ने कार्य एकैपटक हुनेछ । भारतको केईआ..
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत
राधा चालिसे काठमाडौँ, २४ जेठ । विश्व बैङ्कले नेपालको यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव एक प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सेवा र कृषि क्षेत्रमा उत्साहजनक वृद्धि भएकाले उच्च वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको हो । विश्व बैङ्कका अनुसार सन् २०१९ मा सेवा र कृषि क्षेत्रमा भएको प्रगतिले नेपालको आर्थिक वृद्धि सात दशमलव एक प्रतिशत पुग्ने [&hell..
ब्याज अनुदानको ऋणमा बैंक र उद्यमीको चासो
मनिषा चम्लागाईँ काठमाडौँ, २४ जेठ । बैंकले कर्जा लिनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन सुरु गरेका छन् । झापा(नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५ लागू गरेसँगै सरकारी तथा निजी बैंक सेवाग्राही माझ पुग्न थालेका छन् । बैंकले कर्जा लिनका लागि अपनाउनु..
कोरिया भाषा परीक्षामा ९२ हजार परीक्षार्थी
काठमाडौं, २४ जेठ। गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष कोरिया भाषा परीक्षा दिने परीक्षार्थीको संख्या १० हजार भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ८२ हजार बढीले परीक्षा दिएकोमा यो वर्ष ९२ हजारभन्दा बढी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन् । कोरिया भाषा परीक्षा शनिबार र आइतबार हुँदैछ । ईपीएस कोरिया शाखाको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष कोरिया भाषाको परीक्षा दिने ..
चीन र नेपालको सीमा क्षेत्रमा नयाँ मितेरी पुल निर्माण
रसुवा, २३ जेठ । नेपाल –चीनबीच रसुवागढी नाकामा नयाँ मितेरी पुल निर्माण भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल भन्सार सुरक्षा तथा राजश्व गस्ती २१ नं गुल्म टिमुरेका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक जीवन केसीका अनुसार नेपाल चीनको सिमाना रसुवागढीको ल्हेन्देखोलामा चीन सरकारले निर्माण गरेको मितेरी पुलमा आजदेखि यातायात सञ्चालन भएको छ । नेपाल–चीनको व्याप..
कैलाली, २३ जेठ । एक महीनाको अवधिमा धावनमार्ग स्तरोन्नतिको काम पूरा नभएपछि धनगढी विमानस्थल थप एक सातासम्मका लागि बन्द रहने भएको छ । निर्माण कम्पनीले मौसम प्रतिकूल नभए यही जेठ २९ गतेबाट विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आउने जनाएको छ । गत वैशाख २२ गतेबाट उडान सेवा बन्द गरेर विमानस्थलमा धावनमार्ग स्तरोन्नतिका साथै क्षेत्र विस्तारको क..
४३ देशका प्रतिनिधिको ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’ आजदेखि
काठमाडौँ, २३ जेठ । नेपालसहित ४३ मुलुकका पर्यटन व्यवसायीको जमघट रहने ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’को तेस्रो संस्करण आजदेखि काठमाडौँमा शुरु हँुदैछ । पर्यटन क्षेत्रको कुम्भमेलाका रुपमा लिइने मार्टमा अन्तरदेशीय पर्यटन प्रवद्र्धन तथा व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपाललाई हिमालयन प्रवेशद्वारका रुपमा परिचति गराउँदै..
कहाँ हरायो पशुपतिनाथ मन्दिरको २३२ रोपनी जग्गा ?
केशवप्रसाद पाण्डे काठमाडौं, २३ जेठ । पशुपतिनाथ क्षेत्रको २३२ रोपनी जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी नरहेको पाइएको छ । सरकारले गठन गरेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिले १० महिना लामो अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्र्तगत रहेको २३१ रोपनी १० आना एक दाम साबिक दर्ता प्रमाणि..
सीता शर्मा काठमाडौँ, २३ जेठ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सुरू गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई ३० दिने रोजगार दिन सुरू गरेको हो । रूपन्देहीको तिलोत्..
काठमाडौं, २३ जेठ । चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) बूढीगण्डकी आयोजनाबाट पछि हटेको छ। लागत बढाउने चलखेल गर्न नपाउने भएपछि गेजुवाले आयोजनाबाट हात झिकेको हो। बूढीगण्डकी जलाशययुक्त (१२ सय मेगावाट) को ठेक्काको सम्झौता मात्र गर्न बाँकी थियो। गेजुवाले नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी बिनाप्रतिस्पर्ध..
रेलसम्बन्धी बैठकका लागि नेपाली टोली आज भारत जाँदै
काठमाडौँ, २२ जेठ । डेढ दशकअघि नेपाल र भारतबीच भएको रेलसेवा सम्झौताको विस्तृत पुनरावलोकनसम्बन्धी तेस्रो बैठकमा भाग लिन १० सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली आज नयाँ दिल्ली जाने भएको छ । भारतीय रेल मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग हुने सो बैठकमा भाग लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा नेपाली टो..
काठमाडौं,२२ जेठ । आगामी एक वर्षभित्र पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं नआउने निश्चित भएको छ । आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न मेलम्ची विकास समितिले १५ महिनाको समयसीमा तोकेर टेन्डर आह्वान गरेकाले सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो । समितिले हेडबक्स निर्माणका १५ महिना र सुरुङ निर्माणका लागि १२ महिनाको समयसीमा तोकेको छ । गत ६ जेठमा बसेको मन्..
पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण ९५ प्रतिशत सकियो
काठमाडौँ, २१ जेठ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । मुलुकमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा छिटो सम्पन्न हुनेमा परियोजनामा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना परेको छ । निर्माण कार्य सुरु भएको दुई वर्षमा सो परियोजना सम्पन्न हुन लागेको हो । मोतिहारीदेखि अमलेखगन्..